Home Wararka Tuhunkii laga qabay xukuumadda Kheyre ee doorashada KG oo bannaanka yimid kaddib...
Tuhunkii laga qabay xukuumadda Kheyre ee doorashada KG oo bannaanka yimid kaddib markii..
Sida ay Muqdisho Online hore u shaacisay waxaa uu dagaal aan waxba la’isula harin, oo kuraas la isla dhacay uu ka dhacay golaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed.
Sida ay ilo xog ogaal ah Caasimadda Online u xaqiijiyeen, baarlamaanka isu gacan qaaday shalay ay inta badan ka cabanayey faragalinta xukuumadda Xassan Cali Kheyre ay ku hayso arrimahooda masiiriga ah.
Previous articleIsbedelka siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo Saameynta Soomaaliya…
Next articleRW Kheyre iyo Xil. Dhuxulow oo dagaal adag u jira sidii ay u badbaadin lahayeen Inj. Yariiso
74 Tahriibayaal oo ku geeriyootay xeebaha liibiya
War degdeg ah: Abaabul Dagaal iyo Dib u dhaca Doorashada Aqalka...